अपनाउनुहोस् महाभारत यी ५ मार्गदर्शन : जीवन ग्यारेण्टी बन्नेछ सफल ! - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा अपनाउनुहोस् महाभारत यी ५ मार्गदर्शन : जीवन ग्यारेण्टी बन्नेछ सफल !
अपनाउनुहोस् महाभारत यी ५ मार्गदर्शन : जीवन ग्यारेण्टी बन्नेछ सफल !
चाखलाग्दो कुरा admin December 4, 20200Comment
काठमाडौं । महाभारत प्राचीन भारत को दुई प्रमुख संस्कृत महाकावहरु मध्ये एक हो । महाभारतमा त्यस समयको इतिहास श्लोकोंमा लेखिएको छ । वेदव्यास जीद्वारा लेखिएको महाभारत मा १००००० भन्दा धेरै श्लोकहरु रहेका छन । यसमा न केवल युद्धको वर्णन गरिएको छ । बल्कि विषम परिस्थितिमा जीवनलाई कसरी मार्गदर्शन दिने जस्ता कुराहरु पनि लेखिएको छ ।
महाभारत देखि तपाईं धेरै यस्तो कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ । आज हामी तपाईलाई महाभारतबाट संर्घष र संयमको तपाईको जीवनमा हुने प्रयोगको बारेमा जानकारि गराउँदैछौं । यहाँ देखिएका भिडियोहरु क्लिक गर्नुहोस् । साथै यो अति उपयोगी सामाग्री सेयर गरेर अरुलाई पढ्ने मौका दिँदै धन्यवादको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ ।
महाभारत मा एक ठूलो सन्देश छ जीवनमा निरंतर संघर्ष गर्नुपर्छ यसमा सुरु देखि अन्त सम्म जीवन को संघर्ष नै दर्शाइएको छ ।
महाभारत ​​छ कि जीवन मा कहिले पनि, चाहे जस्तोसुकै विषम परिस्थितिको सामना गर्नु किन नपरोस तर संघर्ष देखि हार मानेर बस्नुहुँदैन । संघर्षले नै हामीलाई सफलतासम्म लैजान सक्छ ।
महाभारत मा मुख्य पात्रहरु ले धेरै पल्ट अरूहरु को कुराहरुमा आएर धेरै पल्ट क्रोधमा निर्णय लिएका छन । यसैले उनीहरुलाई पछि नेक्सान भोग्नुपरेको देखिएको छ । त्यसैले हरेक कुरामा निर्णय लिँदा सोचेर सम्झेर लैजाने गर्नुपर्छ चाँहे थोरै समय धेरै किन नलागोस ।
महाभारतबाट अर्को के कुरा सिक्न सकिन्छ भने हरेक कुरामा फैसला गर्नुभन्दा पहिले त्यसले भोलिका दिनमा दिने परिणमहरुका बारेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो निर्णय आफ्नो विवेक र संयताको साथ लिनुपर्छ,हत्तारमा लिनुहुँदैन ।
आफैलाई विश्वास गर्नुहोस्
हामी महाभारतमा पाउने पाठ मध्ये एक छ कि यो हो कि आफुले आफैंलाई आत्म विश्वास गर्न धेरै आवश्यक छ।
यदि हामी आफैले हाम्रो क्षमतामा विश्वास गर्दैनौं भने, त्यसपछि हामी जीवनमा सफल हुँदैनौं।
राजनैतिक दलले सत्ता तब मात्रै पाउँदछ, जब धृतराष्टले सत्ता प्राप्त गरे र दुर्याधनले जुन चतुर्याइले सत्तामा पुग्न चाहेका थिँए हामीले आत्मविश्वासको पाठ सिक्न सक्छौं ।
महाभारतका सबै पात्रहरुमा धेरै प्रकारका डरहरू छन्। धृतराष्टको सत्ताको डर, पांडवहरू हराउन दुर्याधनको डर र अर्जुनको आफ्नै विरुद्ध युद्धको डर।
यस्तो डरले यी सबै पात्रहरुको निर्णयलाई असर गर्ने प्रयास जारी राख्छ । यसले तपाईंलाई के सिकाउँदछ कि जब तपाई भित्र डर लुकेर बस्छ तब तपाईले सही निर्णय गर्न सक्षम हुनुहुन्न ।
अपूर्ण ज्ञान खतरनाक
१।अभिम्यु महाभारतमा उनको विरताको लागि जानिन्छ,तर चक्रव्युह निर्माण गर्दा उनको अधूरो ज्ञान उसलाई मौत को मुखमा पुर्याइ दिएको थियो।
विद्यार्थीले सधैं सम्झना राख्नुपर्छ कि उसले पूरा ज्ञान पाउन सक्छ कि सक्दैन । किनभने हरेक विद्यार्थीले अधूरा ज्ञान पाउन सक्दैन,र पाउँनु हुँदैन पनि अन्यथा अपूर्ण ज्ञानले समस्या पैदा गर्न सक्छ ।